Mgbakwunye na-ejikọta tube tube, ọkpọkọ, ihe nkedo ígwè
Home / ngwa / Ntuchi Mgbakwunye / Itinye n'ọkwa Annealing
Category: Ntuchi Mgbakwunye Tags: mgbakwunye, nzere innection ọla, tubes ọla kọpa, ntinye annealing, usoro annealing, ọla nchara annealing, ogologo oge ịkpọchi, ntinye ntinye, Ntinye annealing ọla, usoro innection abanye ya
Kedu ihe mmegharị na-emegharị?
Usoro a na-agbazi ọla ndị na-arụ ọrụ dị ịrịba ama. Mgbakwunye na-emechi na-ebelata ike, na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-egbochi nrụgide dị n'ime. Ngwakọta zuru ezu bụ usoro ebe a na-atụgharịcha ihe arụ ọrụ niile. Na nchikota azu (nke a maara nke ọma dịka ntaneti), ọ bụ nanị mpaghara emetụ ọkụ na-emepụta na usoro ntanye.
Induction annealing iron bari
Mgbakwunye na-emegharị na normalizing na-anapụta ọkụ ọkụ, nke a pụrụ ịdabere na ya, nke a na-ahazi, njikwa okpomọkụ, na mfe ntinye ntinye. Ntinye aka na-achọ ọrụ ọ bụla iji kwenye nkọwa, yana usoro nchịkwa nlekota nyocha na ịdekọ usoro dum.
A na-ejikarị ígwè ọrụ na tubes na-eme ihe na-ejikọta ma na-edozi. Ọ na-ejikwa waya, mgbanaka ọla, mma mma na ọla kọpa. N'eziokwu, ntinye dị mma maka ọrụ ọ bụla ọ bụla.
Ihe kwesịrị ekwesị maka ntinye ngwa ngwa gụnyere DW-MF, DW-HF na DW-UHF ọkụ ọkụ.
Ntuchi Mgbakwunye Ọkụ Agụmakwụkwọ
Ngwunye Brass Tubing na Ntinye
Ntuchi Mgbakwunye Brass Kpọtụrụ
Ntuchi Mgbakwunye ọla kọpa Wire